Beertii Gabdhaha Caqliga Badan Waxa qoray Wise Man (Bilow Illaa Dhamaad)
Maalin anoo meel iska maraya ayuunbaan sakad aanan mari jirin midig ugu leexday.
Cabbaar markaan socday een isleeyahay noqoba ayaan arkay inay wadadu bidix u leexato. Waxaan is idhi bidixdaa ula leexooo bidix kalena usii leexo si aad wadadaadii hore ugu soo noqoto.
Markii aan soo leexdayba waxaan arkay boodh ay ku qoran tahay: Beerta Gabdhaha Caqliga Badan.
Waanigaa is idhi iska dhaaf koley gabadh caqli badan wax la yidhaah ma jirtee imikuunbay sheekadoodu nin dhaafi waayi doontaaye.
Hadana waxaan is idhi war bal maanta open minded yara noqo oo soo eeg beerta waxa lagu hayo.
Beertii baan garaacay. Gaw-gaw Gaw-gaw
Waxa iga furtay gabadh aad u qurux badan oo yara ilka cas….
Ilkacas baa igu tidhi Afsomali jajaban oo kii fish-ka (ciyaala qurbaha) ah” Maxaan kuu ghabtaa walaal?”
Aniguna waxaan ku idhi” Maxaad meesha ku haysaan?”
Ilkacas: Ma fahmin
Aniga: Meeshu ma dukaanbaa ma waxbaad iibisaan?
Ilkacas: Haa, sort of, soo gal anaa kuu explain doonee.
Waxaan galay beertii.
Waxa ay Ilkacas igu tidhi fadhiiso meel beranda ah oo beerta xageeda hore ku beegnayd.
Runtaa fiicane maan filayn waxaan arkay. Beertu waxay ahayd beer runa. Waxa ku yaalay ubaxyo kala duwan. Waxa ay lahayd dhagaxaan biyo hoos maraan, neecaw iyo shimbiraba.
Waxaan xusuustay buug sheeko ahaa oon beri dhexdiiya akhriyey oo la odhan jiray The Garden of Evening Mists. Buuga waxa ku jiray nin beerta ( bustaanka) uga shaqayn jiray boqorkii Japan ee wakhtigii dagaalka labaad ee addunka.
Inkastoo sheekadu mala’awaal ahayd, hadana qoraaga buugu wuxuu buuga kusoo bandhigay aqoon badan oo xaga beeraha raaxada ay lahaayeen boqortooyadii Japan ee wakhtigaa. Iyo barashada cilmiga beeraha raaxada.
Soomaalidu inta badan ma taqaan beer raaxo. Balse dhaqamada adduunka qaarkood waxay ka gaadheen heer aad u sareeya oo tobaaneeyo sano ayaa hal bustaan laga shaqeeya.
Bustaanka sidaa looga shaqeeyey markaad gasho waxaad awoodi waayaysaa in maskaxdaadu si kas ah u fikirto, haday cadho ama murugo ku haysana kugu sii jiri mayso.
Anigoo la dhacsan dadka beerta sameeyey ayaa waxa isoo dul istaagay Ilkacas iyo islaan la socota…..
Ilkacas baa kadib igu tidhi: Weydii whatever you i weydiisay.
Intaan istaagay baan islaantii ku idhi: Salamu Calaykum edo, waxaan akhriyey boodhka, magaca beerta gabdhaha caqliga badana waan la yaabay, kadib waxaan is idhi ka wardoon.
Islaanta: Edo ha i odhan horta, waa maxay magacayga maad i weydiisid.
Aniga: Okay, magacaa?
Aniga: Ok Evian pleased to meet you.
Islaanta (Evian): Okay , inkastood iska yara edeb daran tahay, hadana nin Soomaaliyeed baad u tahay taase ina mari anaa kuu sharaxi waxaad doonaysee.
Waxaan Evian u daba galay dhankii xafiiskeeda. Nasiib xumo ilkacas way naga hadhay oo namay raacin.
Waxaanu galnay xafiiskii. Waa xafiis si fiican u sharaxan. Kuraas leather ah baa taal, waana xafiis balaadhan.
Waxaan eegay dhankiu gidaarada xafiiska si aan u arko shahaadooyin ama sawiro fikir iga siiya Evian.
Waxay ishaydu qabatay shahaado MSc (Master of Science) oo psychology ah. Cajiib!
Evian: Hadaan ku idhaa faduuli baad tahay maxaad odhan lahayd?
Runtii wakhtigaa waxaan ku jiray 40 maalmood oon is adkeyntaba iska joojiyey. Markaa waxaan go’aansaday inaan si daacada uga jawaabo su’aalaha Evian.
Aniga: waxaan odhan lahaa ma khaldanid.
Evian: Waad ku mahadsantahay jawaabtaada. Hadaba aan kaa siiyo warbixin goobtan Beerta Gabdhaha Caqliga Badan.
Evian waxay ii sheegtay in Beertu tahay urur gabdho Soomaaliyeed oo darafyada caalamka wax kusoo bartay, oo tacliin sare leh shahaadooyin Master iyo PhD miidhana sita ay samaysteen.
Ujeedada ay u samaysteena ay tahay in raga intooda doorbida gabdhaha caqliga badan kala soo xidhiidhaan.
Beerta waxa xubno ka ah illaa 50 gabdhood. Gabadh kastaana waxa ay leedahay computer u gaara oo yaala library-ga.
Maadaama ay gabdhuhu mashquul yihiin, midkastaa waxay diyaarisay imtixaan.
Imtixaanka waxaa loogu talo galay in ninka gabadh damca uu galo horta. Kadib haduu imtixaanka gudbo uu fursad uu gabadha kula hadlo helayo. Kadibna imtixaan toos ah iyo wareysi laga qaadi doono.
Computer-ka waxaa ku jira sawiro, qoraalo, heesaha ay gabadh kastaa jeceshay, waxyaabo kale oo badan oo khaas u ah gabdhaha.
Yaabkayga intay wejigayga la akhrisatay bay igu tidhi Evian: Hadaad rabto inaad aragto computerada waa inaad baastid imtixaanka gelista horta.
Aniga: Ma imika?
Evian: Haa waa imtixaan computer ku jira oo ujeedadiisu tahay in ninka gabdhaha arki kara horta tayadiisa si guud loo hubiyo. Markaa aqoontiisa guud iyo Ingiriisadiisa ayaanu ku eegnaa imtixaankan.
Intaanan u jawaabin ayaa waxa soo gashay Ilkacas oo Turkish coffee ii keentay. Waan dhoola cadeeyey waxaanan ku idhi: Thanks Ilkacas.
Evian baa qososhay oo tidhi: Aduu sidaad u degantay baan ka helayba iyo dhaqankaaga, uma baahnid imtixaanka.
Intaan qoslay baan ku idhi: Dee anuu wax day-day xilligan kuma jiree Evian jooji dacaayada.
Evian: soo kac aan kusoo tus-tuso beertee.
Waanu is raacnay waxaanuna ka baxnay albaab aan ahayn kaanu kasoo galnay.
Suqduud gidaaradiisa sawiro buug iyo dumar caan ah sudhan yihiin ayaan sii dhexmarnay.
Waxay furtay albaab cad oo dhanka midig naga qabtay.
Waxay igu tidhi” Haye gal”, ana waxaan ku idhi ” ladies first”
Way iga horeysay.
Waan galay mise waa hool (lecture hall) weyn oo gabadh gaaban baa lecture wada nin yara oday ahina wuu ag fadhiyaa.
Dhanka kale waxa buugtu u furantahay oo casharka qaadanaya dhawr nin oo dhalinyaradii magaalada ah.
Way yara naxeen. Anoo isleh si diiran u salaan baan u yara kaadiyey markaan arkay Cige (magaciisa dhabta ah waan qariyey) oo is yara kabeeyey.
Waxa meesha fadhiyey illaa 5 nin oon 3 kamida si fiican u gartay.
Evian baa igu tidhi: Wiilashan imtixaankii bay dhaceen laakiin dhibcahoodaa sareeyey. Markaa waxay qaataan casharo si ay markale imtixaanka u galaan.
Aniga: Imtixaankan iyo gabdhahanba maad i tustid?
Evian: Samir daranidaa!
Evian: Haye na wad
Waanu ka baxnay hoolkii, waxaanuna hore usii raacnay suqduudkii. Kadib qol bidixda naga qabtay ayay furtay oo albaab buni ah leh.
Waa qolkii library-ga ee computer-ada gabdhu yaaleen. Waxa yaal 50 computer oo shan saf u kala yaal qolka dhexdiisa.
Hareerana waxa kaga wareegsan buugtii oo shelfyada saaran. Albaabka aanu kasoo galnay waxa dhinaciisa fadhiyey gabadh maariim ahayd oon da’deeda ku qiyaasay 27 sano illa 30 sano.
Gabadh qurux meel dhexaada ayay ahayd laakiin leh jiniyad oo weji furan.
Evian baa kula hadashay ingiriisi gabadhii iyadoo leh: Hi Maryam this is Wise Man and he is here to see the garden. Take care of him he is curious one!
Oo macnaheedu yahay meesha yara tus oo hala yaabin haduu su’aalo badan ku weydiiyo.
Evian baa igu soo jeesatay oobii sheegtay inay xafiiskii ku noqonayso oo hawl yari u taalay.
Waan ka diiday oo waxaan ku idhi: Haygaga tegin inanta isma garanaynee.
Evian iyo Maryamba way qosleen.
Evian way baxday, Maryam oo markaa istaagtay oo ka gaabneyd intaan filayay ayaa ii tilmaantay inaan hore usoo socdo.
Waxay i fadhiisisay computer ay ku qornayd number 1. Waxay ii sharaxday in computerkan laga xumo 49-ka computer ee kale.
Waxaan Maryam ka codsaday inuu jiro imtixaan aan arki karo. Waxay igu tidhi” be patient” oo macnaheedu yahay ha degdegine is deji.
Maryam waxay ii sharaxday in imtixaanadu kala duwan yihiin.
Tusaale ahaan gabdhaha waxa ku jirta gabadh la yidhaahdo Sadia. Sadia waxay baratay politics (siyaasad), da’deedu waa 31 jir, waxaanay u shaqaysaa UN-ta oo waxay joogtaa Kenya. Hadaynu Sadia barbar dhigno Najma oo 35 jira baratayna law (sharciyada) oo ku nool Maraykan way kala dookh iyo imtixaan duwan yihiin.
Waxaan ku idhi Maryam: Rag suuqa miyay ka waayeen waa maxayse imtixaankan iyo ruwaayadani?
Maryam: Gabdhahan rag badan baa daba orda, laakiin waxay rabaan inay hablaha yaryar ee wadanka jooga u furaan wado ay ku tusaan in haday wax bartaan ragu imtixaan u geli doono.
Aniga: Markaa waa waxbarasho dhiiri gelin ee maaha suuq la’aan baan ku idhi anoo yara qoslaya.
Maryam: Quruxdooda adaa ka yaabi inaadeer.
Cajiib. Waan is yara weydiiyey tolow quruxdu ma tii la yaqaanaybaa mise waa tan casriga ee jidhka iyo dibnaha uun la qiimeeyo.
Maryam: Waxay igu tidhi dooro number 1 illaa 50.
Waxaan doortay number 22.
Maryam: waryaaaaaaa! Nasiib badanidaa!
Waan ogaa inaan nasiib badan oo lamaan yaabin. Waxaanse is idhi maxay la qaylisee meesha ku jira.
Waxaanu tagnay computer 22.
Computer number 22 ayaanu tagnay kursi baan soo jiitay waanuna fadhiisanay.
Macluumaadka ku jira computer 22 waxa leh Saynab, oo ah inanta ugu da’da yar beerta. Saynab waa 23 jir.
Maadaama aanan anigu imtixaanka ku jirin, Maryam waxay ogolaatay inay i tusto macluumaadka Saynbab oo dhan si aan fikir guud uga qaato waxyaabaha ku jira computerada beerta.
Saynab waxa ay wax ku baratay Ingiriiska (UK). Waxa ay barayay falsafad iyo taariikh (history and philosophy). Waxayna ka shaqaysaa wasaarada Maaliyada (treasury) ee Ingiriiska.
Saynab waxa ay xiisaysaa inay barato suugaanta Soomaalida. Waxa kale oo ay sheegtay inay jeceshay heesahii hore ee Soomaalida.
Waxa ku qoran qoraalada Saynab in aanay raga Soomaalida ee maanta jira ka arag weli mid markay sheekaystaan wax cusub kusoo kordhiya. Oo ay ka wada hadli karaan badaha cilmiga taariikhda iyo falsafada ee ay baratay.
Saynab Yurub iyo Ingiriiskaba way ka la’day wiil gayaankeeda ah oo waxa kale ha dambeeyaane ay ku qanacdo aqoontiisa.
Sidaa darteed Saynab waxa ay is tidhi bal raga wadankiina fursad sii, inkastoo aanay rajo fiican ka qabin.
Su’aalah Saynab u diyaarisay beertu waxay ahaayeen 10 su’aalood.
Su’aasha koobaad oo hab hal-xidhaale u taalay ayaa ahayd:
Kasoo qaad adoo ah askari ka tirsan ciidan boqortooyo. Boqorka inankiisii, iyo boqor dawlad yar ood jaartihiin wiilkiisa ayaa is afdhaafay, kadib waxa laguu diray inaad soo diyaariso qorshe dagaal sharaf leh oo lagu garaaco ina boqorka kale?
Waan sii akhriyey su’aalaheedii kale waxaanay u dhignaayeen sidan:
Dabeecada ugu muhiimsan ee dumarku leeyihiin?
Maxaa lagu kala gartaa qofka qalbiga wax ka arka iyo qofka indhaha wax ka arka?
Hadaad xirfad baran lahayd maxaad baran lahayd? Waayo?
Samirka iyo dulqaadka kee fiican inuu ninku yeesho keebaase fiican inay gabadhu yeelato?
Maxaa lagu kala gartaa marka naftu wax kuu sheegayso iyo marka shaydaan ku waswaasinayo?
Maahmaahdee ugu jeceshay maahmaahaha Soomaalida?
Hadii lagu yidhaa been ku shukaanso been noocee ah baad sheegi lahayd?
Wixii ugu qaalisanaa eed samayso muxuu ahaa?
Dumarka maxaad ku xulataa?
Su’aalaha oo qaarkood iska yihiin su’aalo fudud ayaa hadana waxa ay ku dhex dartay su’aalo yara adag oo ay ugu talo gashay in caqliga inamada imtixaanka gelaya ay ku eegto.
Waxaan ka dhadhansaday in su’aalahani ay eegayaan fikirka inamada ee aanay eegayn jawaab saxa.
Maryam baa igu tidhi bal u jawaab oo u dir.
Aniga: Dee anuu ma lugoynayee iga daa.
Maryam: Oo maad garanaysaa jawaabaha?
Aniga: Haa si fiican.
Maryam: su’aasha 3aad nin ka jawaaba wali maanu arag.
Maryam: Car ka jawaab.
Anoo raba inaan akhristayaasha fursad siiyo ayaan jawaabta aanan soo qori doonin.
Waxaan u sheegay jawaabtii, way ka yara fikirtay. Waan usii sharaxay, indhahaa soo baxay.
Maryam: Xageed ku baratay waxan aduu?
Maryam: Jawaabaha su’aalahan ma ex-keedii baad tahay?
Aniga: Weligayba maan arag, ee iyadaaban la yaabanay xagay ka keeentay su’aasha sidan i weyn.
Waxa dib usoo noqday Evian iyo Ilkacas oo wada socda. Ilkacas oo boorso sidata oon is idhi way rawaxaysaa.
Evian: Haye Maryam kawaran ma tustay xariifkii wax? Muu cararine sawkan jooga?
Maryam: Kani waxbuu garanayaa wallaahi.
Ilkacas: waa faarax lost ah baan islahaaye
Aniga: Ilkacas afsoomaaliga haku darin ingiriisada. mid uun ku hadal.
Waa la yara wada qoslay.
Waxaan ku idhi: Waad mahadsantihiin gabdho waan yara degdegayee, beri masoi noqdaa?
Evian: Runtii dadku hadaanay barnaamijkayaga ka qayb qaadanayn nama soo booqdaan laakiin , let me talk to Maryam.
Maryam iyo Evian ayaa isu raacay dhankui xafiiska Evian.
Waxaanu isku soo hadhnay Ilkacas.
Aniga: Ilkacas magacaa?
Ilkacas: why? Ilkacasba ku deyso.
Aniga: okay computer numbeekaagu waa kee?
Ilkacas: OMG im not that old.
Aniga: How old are you?
Waanigaa ka fikiray dadka marka da’dooda la rabo waxa la eegaa ilkahooda. Dee ilkahaaga itusna kuma odhan karo oo wayara khatar.
Hadana waxaan is idhi badanaa dumarka markay noqoto su’aasha lagu weydiiyey iyo su’aasha ku hoos jirta isku mid maaha.
Waxaan go’aansaday inaan ana la wadaago kaftan. Maadaama aan dareemay inay kaftamayso.
Runtii anuu Ilkacas dan kama lihi, hungurina igama hayo, laakiin waxa weli aan rabaa inaan ka gun-gaadho beerta.
Waxaan ku idhi ilkacas: dumarka da’dooda waxa lagu gartaa waxa ay ku qoslaan. Tusaale ahaan 15 illaa 17 jir waxay ku qoslaan, 23 jir illaa 26 ku kuma qoslaan. 18 illaa 22 iyaguna way ka duwan yihiin. Aan ku tuso video si aan u arko waxaad ku qososho.
Waabay qososhay .
Aniga: Dee ha qosline sug
way kasii dartay.
Waana intaan rabay , anagoo wada qoslayna ayaa waxa nagu soo noqday Maryam iyo Evian oo wada socda.
Waxay ii sheegeen in ay aqbaleen inaan berri soo noqdo laakiin aan habeenimada imaado oo ay xaflad leeyihiin. Telefan numberkaygana way qorteen si aanay hadhaw u dhicin in layga celiyo albaabka.
Waan u mahad celiyey, waxaana aanu dibada usoo wada baxnay Ilkacas.
Anoo markaa isleh Ilkacas weydii oo dheh caawa xaflada makusoo maraa mise keligay uunbaan is keenaa, aan ku war helo gacanta garabkayga xooga u qabatay.
Waan eegay mise waa saaxiibkay MC oo yara xiiqsan.
MC: Waryaa Wise wa ayo inantan quruxd badani?
Aniga: Horta aniga i salaan bal.
MC: Koley way i garanaysaa, iska waran huuno.
Ilkacas oo yara yaaban laakiin dhoola cadeynaysa ayaa ka qaaday salaantii.
Aniga: Ilkacas baro MC , hana ka baqin ma waalnee.
MC: War waan ku sugayaa iska dhamaysta, dukaankaan sigaar kasoo iibsanayaaye.
Ilkacas: dhamayaysta what?
Aniga: Wuxuu moodayaa inaad i shukaansanaysid
Ilkacas: qosol (kkkkk) oo ma gabdhahaa ku shukaansada adiga?
Aniga: Mayee waa nin fiiro dheer sxbkay. Markaa sidaad iila hadlayso iyo qosolkaaga ayuu arkay, markaasuu is yidhi way ku haysataa.
Ilkacas: you cannot be serious!
Aniga: Waan kaftamayaa, laakiin waxaa wuu ku fiicanyahay. Caawa miyaan kusoo maraa?
Ilkacas: Numberkayga hoo, call me 5 pm.
Aniga: Ok waa inoo hadhow.
Dhankii dukaanka ayaan u kacay. Waxaba iga hor yimid MC oo heesaya.
MC: Gabadh qurux badan bay ahayde niyow wa ayo.
Aan si kooban ugu guudmaro sheekadii beerta.
MC: maanta kala hadhi mayno, imikana ina mari gurigii Pirlo.
Pirlo waxaanu ku naanaysi jirnay nin odaya (45 jir) oonu saaxiib ahayn oo Maraykan ka yimid kuna takhasusay chemistry. Magaciisa caadiga waxa la odhan jiray Ismaaciil laakiin naanaystiisa Pirlo ayaanu ugu yeedhnaa.
Pirlo waxa uu gurigiisu ku yaalay magaalada dhinaceeda waxaanu ahaa guri jano dhalinyaro ah.
Pirlo gurigiisa waxa yaalay, chess, PS4, XBOX 360. Waxa ku yaalay mawlac lagu tukado, gym , iyo lab ama laboratory.
Pirlo waxa uu la yaab kulahaa isagoo dadka guriga ku booqda marmar siin jiray shaaha ugu macaan dunida intaan shaah cabay.
Pirlo lab-ka ayuu biyaha uu shaaha ku samaynayo ku sifeyn jiray. Kadib isla lab-ka ayuu kolba nooc shaah ah oo uu si gaara u dirto ku karin jiray isagoo pressure-ka, heerkulka , sonkorta, xawaashyada waxkasta ugu qiyaasaya si cilmi ( scientific) ah.
Waxaan la qaatay MC inaanu Pirlo wacno oo hadaanu hawl lahayn u tagno.
MC ayaa wacay Pirlo. Nasiib wanaag, Pirlo firaaqo ayuu lahaa oo waxaabay balansan yihiin qaar ay game-ka wada ciyaari jireen.
Aniga: Niyow arrinta beerta haw sheegin xerta Pirlo iyo.
MC: okay, haygu khal-khalin adna oo shaaha sidaadi haku mirqaamin.
Aniga: Waa hagaag.
Waxaanu gaadhnay gurigii Pirlo.
Sidii caadada ii ahayd markiiba intaan salaadii tukaday ayaan koob shaaha ka codsaday Pirlo.
Pirlo: Yo Wise, hal ciyaar oo chess ah ila ciyaar sxb shaaha ka hor. Kadib khadkaad ka baxaysaaye.
Aniga: Niyow waan daalanee haygu adkeyne mee Tesfaye.
Tesfaye waa xabashi adeege u ahaa Pirlo oo shaaha noo keeni jiray.
Pirlo: Suuquu ku maqan yahaye sug anaa kuu soo qabane.
Iska shaahaynay, PS4-na iska ciyaarnay.
Markay 5-tii galabnimo ku dhawdahay ayaanu ka tagnay oo xagii guryaha aanu u kala dhaqaaqnay.
Maadaama ay xaflad tahay, waxaan isku giijiyey jeans madaw, blazer brown ah iyo garan saafi ah oo madaw.
Waxaan message u diray MC oon ku idhi xageen kuugu imaadaa. Waabu xiirasho tegay.
Waxaan wacay Ilkacas. Waxay tidhi 7 pm iigu kaalay waxaanay iigu soo dirtay meeshay joogto whatsap-ka.
7 pm aniga MC aanu soo qaadno Ilkacas.
Markaanu beerta agmareyno hanoo sheegto in xafladu bilaabmayso illa 9-ka.
Aniga: Okay xagaynu ku sugnaa inta hadhay.
MC: Anaa garanaya meel cusub ee ina mariya.
Runtii MC waxa uu na geeyey goob coffee laga cabo oo aanan hore u aqoon balse leh jawi degan.
Ilkacas oo si wacan usoo lebisatay, waxaabad moodeysay inay quruxdeedii laba dhibcood ku kordheen.
MC ayaa u qabtay inantii sheeko macaan oin laakiin kun jeer usoo taagnaa isagoo kolba gabadh uga sheekeeya.
Ilkacasna way ku socotay sheekadu, qudhayduna hoostaan ka qoslayay, waanse u daayey saaxiibkay oo waxaan idhi daa ha dhamaystee.
MC sidii uu ugu miisayay hadalka Ilkacas ayay markeliya kasoo jeedsatay.
Ilkacas: War maxaa ku aamusiiyey?
Aniga: Waxa igu soo dhacday heestii Saado Cali Warsame, Alle haw naxariistee ee Beerkaad iiga taallaa. Kadib waxaan xasuustay heeso iyo halku dhigyo ay soomaalidu leedahay oo beerka iyo jacaylka isku xidha
MC: Naa waa boring ee xiiso maleh.
Aniga: Ilkacaseey adaa Af Ingiriisada aad u yaqaanee, miyaad haysaa odhaahyo, maah-maahyo ama hal-hayso beerka iyo jacaylka ama naxariista iyo beerka isku fasira. Oo sida Soomaalida oo kale beer wax dhalay, beerka Xuunshada ah?
Ilkacas: i don’t understand
Aniga: dee imika waa kan sayniskii horumar gaadhay. Maalin dhexdiiya ayaan daawaday documentary film ka hadlaya aqoon cusub oo wadnaha laga ogaaday lana xidhiidha dareemada dadka gaar ahaan jacaylka.
MC: Wuu kugu dul samaynayaa, waa beentii, iska illaali.
Saddexdayadiiba waanu qosolnay.
Intay dib ugu tiirsatay kursigii ay fadhiday, ayay tidhi ” please continue”
Aniga: Adduunka dadyowga ku nool oo dhami way isku raacsan yihiin barta jacaylku dadka ka fadhiistaa inay tahay wadnaha. Balse dhawaan ayaa saynisku ogaaday in wadnuhu leeyahay unugyo neurono gaar ah oo uu sida maskaxda ugu kaydiyo dareemada.
MC: Markaa ma waxaad leedahay wadnahaa si gaar ah u fikira oo xusuusna kaydiya sida maskaxda oo kale?
Aniga: Caqliga ha waayin. Saasay ina leeyihiin cilmi baadhayaasha qaar ka mid ahi.
Ilkacas: Wallaahi i never heard that!
Aniga: Waa runtay, waxay sheegeen in wadnuhu kaydsado xusuusaha qaar, fikiri karo, sida maskaxda oo kale. Weliba dareenada qaar kamid ah ayay farta ku fiiqeen. Sida jacaylka, naxdinta iyo boholyowga qaar sida dal-tabyada.
MC: Camu, caawa bundad cusub ayaad furtay, bal wad waan kaa raaciye.
Waan kaa raaci wuxuu ka wadaa sida gool-wade kubad rigoore ah inta lagu laaday intuu raaco qabanaya. Waa been baad sheegaysaa oo uu Ilkacas ka qarinayo.
Aniga: Anuu waxaan is weydiinayay hadii wadnuha la ogaaday inuu maskax gaar ah leeyahay, tolow beerkana unugyo noocaasoo kale ah malaga helayaa. Illeyn soomaalidu waa tanoo beerka waxbaa u galay, jacaylka ay sheegtana wadnaha waxay raaciyaan beerka.
MC: Niyow hada heeso badan waa runtaayoo heeso badan beerku wuu ku jiraa.
Waxaabuu soo qabtay heesta tidhaa (labxadayda beerkiyo, hadaanan laabta kugu qaban)
Ilkacas: Luuqada Soomaaliga weligay ma fahmayo. Its so deep.
MC: Beerkaa inoo hay oo ina mariya way gaadhee.
Intaanu sii soconay oo dhan inantii waxayna weydiinaysay kolba hees beerku ku jiro. Illaa beer lula waanu u sheegnay.
Waxaanu gaadhnay oo galnay Beertii.
Xaflad si hagaagsan loo soo agaasimay oo dad badan oon garanayo iyo qaar igu cusuba joogaan baa socotay.
Da’yar intii magaalada ugu firfircoonayd badankoodu way joogeen.
Waxa ishaydu ku dhacday Evian oo la taagan oday yar oo madaw oon is idhi jinsiyadiisu ma Congolese baa.
Way na aragtay Evian, waxaanay u soo dhaqaaqday dhankayga odaygiina way soo kaxaysay.
Weji furan ayay nagu salaantay.
Waxay noo sheegtay in odayga la yidhaah Samuel oo uu yahay qoraa. Ana waxaan baray saaxiibkay MC mihnadiisana waxaan ku idhi waa fanaan soo baxaya.
MC ayaa isagoo yaaban isoo eegay.
Aniga: Evian xafladan horta maxaa loogu talo galay?
Evian: ina mari horta aan kusoo baro dhawr qof oo muhiimee.
Waxay ii geysay laba gabdhood iyo wiil wada taagan oo qoslaya.
Labada gabdhood da’dooda waxaan ku qiyaasay inay sodonka cago-cagaynayaan.
Midbaa iila ekayd reer Jabuuti, midna waxaan u maleeyey inay carabaha ku kortay. Inanka laakiin waan gartay oo dhalinyarada magaalada eenu is weji naqaano ayuu ahaa.
Evian: Inantani waa Haboon, inantana Manal iyo Axmed.
Aniga: Barasho wanaagsan magacaygu waa Wise.
Waxaan dareemay in aan sheeko ka dhex galnay. Oo weliba inanku uu yara karahsaday imaatinkayaga.
Waxaan damcay inaan la kaftamo kadibna hore u dhaafo.
Waxaan ku idhi wiilkii Axmed intaan Haboon farta ku fiiqay” ma adaa watay aan su’aal weydiiyee?”
Aniga: inantan ma idinkaa wada socday?
Intaanu jawaabinba ayaa waxa jawaabay inanta laftarkeedii oo iyada oo indhahana ka qoslaysa, iskana dhigaysa inay xanaaqsan tahay ay tidhi” Heey waryaa anigu ma tagsii baan ahay, see lay wadan!”
Evian: Wuu kaftamayaa, he is a joker.
Runtii Axmed laftarkiisu wuu is daba qabtay oo wuu fahmay inaan rabay inaanan ka jiidhin.
Markaasuu intuu dhiiraday yidhi” Mayee tanaan rabaa inaan kaxaysto oo is macaanaynaysa” intuu farta ku fiiqay inantii kale ee Manal magaceeda laygu sheegay.
Si wada jir ah ayaa loo qos-qoslay.
Waxaan dib u jaleecay qoladii aan ka imid ee sxbkay MC, Ilkacas iyo Samuel.
Waxay indhahayagu isku dhaceen MC oo xagayga soo jaleecay isla markaa. Samuel oo agtaagnaana waxa uu iila muuqday mid telefankiisa wax ka tusayay Ilkacas.
Madaxaan u lulay sxbkay MC anoo dareensiinaya inuu ka dhexgalo oo odayga ka qabto Ilkacas. MC isna garabkaabu ka taabtay Ilkacas oo intuu xagayga farta kusoo fiiqay ayuu ku yidhi sidaan u fahmay ina mari u tagnee.
Samuel isna wuu soo daba galay.
Intaanay nasoo gaadhin ayaan Evian dib u weydiiyey su’aashii ahayd ujeedada xaflada.
Evian: Waa xaflad is barasho.
Aniga: oo odaygan Samuel-na muxuu ahaa?
Evian: Waa qoraa weyn, waana activist u dooda xuquuqda dumarka.
Waan ka biyo diiday odayga waxa ay iigu sheegtay Evian.
Markii ay nasoo gaadheen, si aan ciyaarta uga xidho odayga, waxaan markiiba bilaabay kaftan aan i hayn.
Waxaan isku dayay inaan is baro hablihii.
Waxaanan Ilkacas ku idhi xagan agtooda soo istaag.
Aniga: tiina ugu dheer baan eegayaa.
Way dhaqaaqday waanay ag istaagtay.
Waxaan ku jeestay odaygii Samuel mise waxa ay wada hadlayaan Evian.
Waan ka dhex galay, waxaan weydiiyey Samuel inuu sidii lay sheegay yahay qoraa iyuu wax ka qoro.
Samuel wuxuu ii sheegay inuu alifo buugta sheekooyinka. Sheekooyinkiisana uu inta badan qofka sheekadu kasocoto ka dhigo qof dumar ah.
Waxaan u fahmay inuu yahay xariif farsamo uu dumarka ugu dhawaado mihnadan u galay.
Si aan u tuso in aanan soo dhaweynayn oo aan fahmay ayaan hoos ugu dhigay oo weydiiyey inuu noloshaba dumar uun kusoo koobay oo eryanayo illaa imika isagoo nin weyna.
Wejigiisa ayaa is bedelay markaasuu iga dhaqaaqay.
Haboon oo show la socotay is af-dhaafka anigiyo Samuel ayaa ii timid iyadoo qoslaysa.
Haboon: Waryaa odayga maxaad ku tidhi waadiga ka xanaajiyee?
Intaanan jawaabin ayaa waxa iyaduna agtayda soo istaagtay Ilkacas oo markay Haboon oo ii timid aragtay kasoo dhaqaaqday MC.
MC isna ka daba yimid Ilkacas Isagoo leh xageed tegaysaa.
Axmed iyo Manal sheekadooda ayay wateen oo maysoo dhaqaaqin.
Aniga: Habooneey waxkale maahee isagoo intaa le’eg buu hablo uu awow u noqon karo eryanayaa. Ana waxaan ku idhi noloshaba dumar baad ku mashquulsantahay.
Haboon: Atleast raga Soomaalida wuu dhaamaa.
Aniga: Muxuu ku dhaamaa?
Haboon: Dee waa nin wax bartay. Raga isaga le’eg ee Soomaalida way ka tamar yaryihiin. Qayilaadna kama kacaan. Ninkana xuquuqda dumarka ayuu u doodaa, gabdhahana wuu taageeraa.
Aniga: Waxaasi waa waxaad iska samaysatee, wax aan ku qanco ii sheeg.
Haboon: Tusaale aan ku siiyo. Anigu gabadh wax baratay baan ahay. Gabadh shaqaysata ayaan ahay. Djibouti, Hargeysa iyo Dubai waan ka waayey nin aan u istaago. Imika waxaan rabay inaan iska qoro barnaamijkan Beerta Gabadha Caqliga Badan.
Aniga: Arrintan aad ii sheegtay iyo odaygan khariban maxaa iska galay?
Haboon: In habluhu ururo noocaasa sameeyaan ayuu taageeraa. Buugtiisana waa la jecelyahay, gabdho badana way jecel yihiin hadaladiisa taageerada hablaha. Saasaa loo casuumay sidaan filayo.
Haboon waxay wejigayga ka dheehatay inaan ka biyo diiday doodeeda oo aanan ku qancin.
Haboon: Adiga maxaa kugu diray, ma saaxiibadaa ayuu kugu qabsaday?
MC ayaa lasoo booday Saaxiibadii maaha!
Ilkacas: Saaxibadii ma ihi
Aniga: Waa kuwaa kuu jawaabay
Waxa ii muuqatay in Haboon dhib jira ay sheegtay laakiin jawaabta laga siiyey ama xalku ka khaldan yahay.
Aniga: Walaalo fikirkaa kaa khaldane dhibaatada inaad hesho wiil kuu qalma way fududahay
Haboon: Anigoo kali ah maaha .
Intaanay hadalka dhamayn waxa nasoo gaadhay Evian oo xanaaqsan.
Evian: Samuel left. Wuu xanaaqay, waanu baxay. Imika khudbadiisii kaalay adigu noo samee.
Aniga: I am sorry saas inuu u cadho dhaw yahay maan moodayn. Ha iska tagee daa
Evian: Bal eriday ninkii dadku hadalkiisa sugayeene maxaan sameeyaa imika!
Ilkacas oon goorahaa hadal ayaa ku darsatay in maadaama aan anigu odaygii eryay inaan hadlo, halaygu qoslo hadii la doonee.
Aniga: Adigu horta maxaad odayga isku lahaydeen
Haboon: Haa hadaadan la hadal muu maageenba odayga.
Waxaan aqbalay inaan Samuel bedelo oo khudbad kooban idhaahdo. Balse mid aniga ii gaar ah oo tiisii aanan akhriyin.
Kadibna waxaan ku bilaabay “Salaamu calaykum”
Evian waxa ay aamusiisay dadkii.
Waxayna ku wargelisay inay su’aalo I weydiin karaan. Waxay dooratay gabadh dheer oo funaanad cad xidhnayd oo xaga dambe taagnayd.
Evial: Leyla at the back (Layla oo xaga dambe taagan)
Inantii Layla loogu yeedhay ayaa markiiba I weydiisay “Magacaa walaal?”
Aniga: Wise Man
Layla: Aan ku waramee walaal Wise Man-ow Beerta waxaan kamid ahay dadkii ugu horeeyey ee is qora, imikana waxaaban ka shaqeeyaa email- warka Beerta iyo hawlaheedaa lagu qoro oo todobaadkii hal mar la diro. Ugu yaraan 5 kun oo nin ayaa walaalo email-kaasi ku xidhan. Welina maanu arag nin sidaada oo kale runta ka hadla. Adiga ayuunbaanu ku aragnay nin wax noo sheega am aka horyimaada. Raga kale way noo nacam leeyaan weliba rag waaweyn iyo yaryarba ninba hablaha meesha ayuu intaa isku wadaa oo wax dhaliila kama aragno. Adigu ragaas oo kale maxaad u noqon weyday?
Aniga: Dee kama duwani oo waan ahay malaha dantii yaqaan baanan ahayn.
Dadkii goobta joogay badhbaa qoslay. Balsee inantii funaanada cad gashaynayd kamay hadhin inay su’aal I weydiiso. Waxaanay markan I weydiisay su’aal aad u adag.
Layla: Maad nagu soo biirtid aanu wax kaa fa’iideysanee?
Aniga: Dood iyo aqoon is weydaarsi waan ogolahay balse wakhtigaygaa xadidan. Runtiina intaan idiin sheegay idinkuba waad garanaysaan ee waxa idin hoday raga idin horyaacay ee bilaash sacabka idiinku tumay.
Anoo hadalkii wata ayaan markeliya dareemay qof isoo garab istaagay oo gacanta garabka iga saaray. Waan jaleecay mise waa Ilkacas.
Hadalkii ayay iga boobtay.
Ilkacas: I am a shy person most of you know that. Balse ninkan oo kale ayaynu u baahanahay. Nin aan runta ka baqanin. Nin cool ah oo aan isku buuqin. Iyo ta ugu muhiimsan oo ah nin hablaha ka naxaya oo waxa fiican u sheegaya.
Markeliya ayaa sacab is qabsaday.
Habeenkaa aniga, MC iyo Ilkacas markaanu ka baxnay Beerta waxa hore noo sii raacday Evian. Iyadoo igu maagtay inaanay caawa kadib Beertu sii jiri doonin hablo badana fikirkoodii is bedelay. Iyaduna ay imika shaqo doonis iyo hawl geli doonto.
Runtii waan ka xumahay ayaan ku idhi Evian. Anagoo qoslaynana way naga tagtay.
Saddexdayadii kale ayaa intaanu is eegnay nidhi aan sii yara caweyno e. aynu tagno Time and Space Café.
Mar allaale markaanu albaabka sidaa uga galnay Time and Space ayaa saaxiibkay MC telefan usoo dhacay. Waxaanay noqotay in hawl degdegi kusoo baxday oo aanu nala sii joogi karin.
MC anaga oo ka xun ayaanu fasaxnay.
Ugu dambeyn aniga iyo Ilkacas ayaa isku soo hadhnay. Nasiib darro-se hal miis kamuu banaanayn maqaaxida. Meel kasta dhalinyaro ayaa buux dhaafisay habeenkaas.
Mar dambe ayaa naloo helay kursi u dhaw miis ay laba nin oo midi yara weyn yahay iyo laba gabdhood oo midi castahay, midna maariin tahay fadhiyaan. Oo weliba ninka yara weyn si xoog leh saddexda kale u dhegaysanayaan.
Aniga iyo Ilkacas ayaa ag fadhiisanay markaasay nasoo eegeen.
Intaanay ila hadal ayaan erayadan iskaga waabiyey anoo ku leh “waanu isku cusub nahee hanala yaabina “
Afartoodiiba way qosleen.
Feminism Haasaawe Ilkacas Jacayl Sheeko
Previous Post Jacaylkii Koobaad – Cutubka Labaad – Qaybta Laba iyo Tobnaad
Next Post Keyse iyo Jack – Waxa qoray Wise Man
wllo Wise Man sheekadu waxay ugeetahye inaanay dhamaan , miyaad iso diri kaarta inta kaleh fadlan .
Haa bro iyadoo buug ah ayaan soo wadaa.
Zxp sheekadu caadi maha iyo dhamaystiran jeclan laha mahadsanid and thank you
Saaxiib waa dhamaad.
I’m interesting your story walaahi, wise man saxiib waad mahadsantahay aad iyo aad , ii dhamaystir sheekada Qosol iyo jewi kale ayaan galee…
sida sixirka ayaaan u cabay sheekadan😂
kkkkkk saaxiib dee waa intaas laakiin sheekooyinka kale sii akhri. Aad baad u mahadsantahay saaxiib.
Saxiiib aadban ugu hellay Sheekadaadan Kumana Khasaarin wakhtigii an galiyaay Intaan Dhex mushaaxayay Beerta iyo Sheekadan basle hal suaal ban qaaba.
Saxiib Questionka(6) Waxaan Is waydiiyay Ka hore intaanan sheekadan akhrisan 100-jeer wanaan ku khalkhalay baddana dad wax akhriyaa ayaan ahay waxan gaadhay Heer aan haboonen inan halkan kaga Faalado
Marka walaal waxa aan jeclaan laaha inaad Suaasha aad ila wadaagtid.
Waxa lagu garto marka nafta ama shaydaanku waa mar kastood dumar ka fikirtid.
Hey Wise man, caawa iigu horeysa web kan runtiina aad baan uga hore dhawr sheekana waan akhriyay durba.
Caawa waxay u eegtay inaan halkaa ku joojinayo. Lkn waan kusoo noqnoqon doonaa dagalkan, waayo maaha mid laga xiisa dhacayo.
Aad baad u mahadsantahay sxb.
Soo dhowow sxb. Aad baad u mahadsantay.
Waa sheeko dhiiri gelin leh habluhuna waa inanay arkin waxbarashoda ama shaqada ay yan wakhtiga blse ay fahman nolosha dhabta ahi waxay tahay
Haa walaalo. Waad fahantay mashaAllah.
Xaas Raadiye Program 16
Xusuus Qorkii Maxamed S Gees - Sanadihii Cadhada 10
10 Ficil Ood Ku Garan Karto In Uu Ku Jecel Yahay. 7
Duufaanada Siyaasadeed Ee Ku Xeeran Dalka. 5
Sideed U Aragtaa Mustaqbalka Somaliland? 4